नाम परिवर्तन संगै अरुणले ५४ करोडको हकप्रद जारी गर्ने, कती पुग्छ पुँजी ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
नाम परिवर्तन संगै अरुणले ५४ करोडको हकप्रद जारी गर्ने, कती पुग्छ पुँजी ?
काठमाडौ । अरुण फाइनान्स कम्पनीले नाम परिवर्तन गर्ने भएको छ । अरुण फाईनान्स लाई परिवर्तन गरेर हाथवे फाइनान्स कम्पनीमा रुपान्तरण हुने लागेको छ । कम्पनीको विहीबार सम्पन्न २१ औं वार्षिक साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
अरुण फाइनान्सलाई हाथवे इन्भेष्टमेन्टले खरिद गरेको थियो। हाथवेले खरिद गरेको अरुण फाइनान्सको नाम तथा लोगो परिवर्तन गरेर हाथवे फाइनान्स बनाउन लागिएको हो ।
साथै कम्पनीले चुक्ता पूँजी बढाउन ५४ करोड रुपैया बराबरको १८० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । धरानमा सम्पन्न साधारणसभाले हाल कायम चुक्ता पूँजी ३० करोड रुपैयाँको १८० प्रतिशत हकप्रद जारी गरेर राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पूँजी कायम गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । १८० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर पूँजीकरण गरेपछि संस्थाको चुक्ता पुँजी ८४ करोड पुग्नेछ ।
साथै कम्पनीले मर्जर तथा एक्वीजिशन गर्न आवश्यक सम्पुर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान समेत गरेको छ । त्यस्तै सभाले संस्थाको सेयर स्वामित्व संस्थापकतर्फ ६० र सर्वसाधारणतर्फ ४० प्रतिशत रहेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम संस्थापक सेयर ५१ र सर्वसाधारण सेयर ४९ प्रतिशत कायम गर्ने भएकोे छ ।
समस्याग्रस्त संस्थाको चुक्ता पूँजी पुर्याउने सिमा राष्ट्र बैंकले ०७६ मंसिरसम्म तोकको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ न्युनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
साधारणसभाले संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट अम्बिका प्रसाद पौडेल, लिलानाथ अधिकारी र प्रकाश तिवारीलाई संचालकमा निर्वाचित गरेको छ।
लघुवित्तको १ लाख ८० हजार कित्ता आइपीओ आउँदै, कहाँबाट दिने आवेदन
काठमाडौं । नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वैशाख १२ गते देखि आइपीओ बिक्री खुला गर्दैछ
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले २.५० प्रतिशत बोनस सेयर र ९.३० प्रतिशत नगद लाभांश दिने